July 20, 2019 »
१२ वर्षीय गरिमा २ दिन देखी बेपत्ता, खोजी गरिदिन परिवारको आग्रह (सेयर गरी सहयोग गर्नुहोला)
दाङ श्रावण, ५ । दाङको तुल्सिपुर बाट २ दिन देखी एक बालिका बेपत्ता भएकी छिन् । दाङ जिल्लाको दंगीशरण गाउँपालिका – ६ राजपुर निवासी जयबहादुर कुँवरकी १२ वर्षीया छोरी गरिमा कुँवर दाङको तुलसीपुर बाट शुक्रवार देखि बेपत्ता भएकी हुन् । शुक्रवार घर बाट तुल्सिपुर बजार आएकी गरिमा घर नफर्कीए पछी परिवार चिन्तामा परेका छन् । बेपत्ता बालिका गरिमा लाई खोजी गरिदिन परिवारले सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ । वेपत्ता बालिकाको खोजीका लागि परिवारले सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ । गहुँगोरो वर्ण, अनुहार लाम्चो, कपाल छोटो, उचाई करिब ५ फिट अग्ली…
काठमाडौँ ४ श्रावण । चर्चामा रहेका लोक दोहोरी गायक पुस्कल शर्मा, आफैमा नायक पनि हुन् । धेरै जसो बियोगान्ताका गीत गाउने पुस्कलका गीत निकै चर्चामा रहेका छन् । गायक पुस्कल शर्मा लाइ गीत चोरीको आरोप लागेपछी लोक गायक पुस्कल शर्मा मिडियामा आएका छन् । उक्त गीत चोरेको विषय पछिल्लो समय भाइरल बनेको छ । पुस्कल माथि पीडित कलाकारहरूले आफ्नो सृजना चोरी भएको भन्दै तत्काल नै नाम राख्न अनुरोध गरेपछी शर्मा मिडियामा आएका हुन् । पुस्कल शर्मा आफ्नो अवस्थालाई बुझ्न नसकेपछी मिडियामा आएका हुन् । २० वर्ष अगाडी नै यो गीत…
विदेश बाट नेपाल आउँदा यस्ता सामान ल्याउन पाइने । सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ सूची
काठमाडौँ, ४ साउन । के तपाइ विदेश बाट फर्कँदै हुनुहुन्छ? घर ल्याउनको लागी सामानहरू तयारी पार्दै हुनुहुन्छ? यदि तयारी गर्दै हनुहुन्छ भने पहिला विदेश बाट के कति सामान लैजान पाइन्छ भन्ने बारे जानकारी लिनुहोस् । विदेश बाट स्वदेश नेपाल फर्कँदा ल्याउन पाउने सामानको नयाँ सूची सार्वजनिक भएको छ । यो भन्दा पहिलेको सूची विस्थापित गर्दै सरकारले नयाँ सूची सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब विदेशबाट लुगाफाटो, घर गृहस्थीका पुराना सामान, औषधि उपचार गराई बिरामीले ल्याएको औषधि, शारीरिक रुपमा अशक्त यात्रुले सहाराका रुपमा प्रयोग गरेका सामान, ५० ग्रामसम्म सुनका…
काठमाडौँ ४ श्रावण । जादुमय स्वरकी धनी गायिका समीक्षा अधिकारीको पहिलो तिज गीत बजारमा आएको छ । सानै उमेर देखी कलाकार बन्ने महान् उद्देश्य बोकेकी समीक्षाको आवाजले दर्शक श्रोताको मन जित्न सफल भएकी छिन्। समीक्षाको स्वरमा रहेको ‘सलक्कै’ बोलको तिज गीत उनको पहिलो तिज गीत हो । गीतमा वसन्त विश्वकर्माको शब्द सङ्गीत रहेको छ भने समीक्षा अधिकारी र मधु पाण्डेले आवाज दिएका छन् । मायाले लगाएको ढाका टोपी र रातो टिकाको कुरालाई तिज गीतमा समेटिएको छ । हिम सम्झौता डिजिटलको प्रस्तुति रहेको गित लाइ कारण चैसिरले खिचेका हुन् भने मनोज…